Dowladda oo lagu xukumi karo magdhaw la siiyo qowmiyadda Roomiga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dowladda oo lagu xukumi karo magdhaw la siiyo qowmiyadda Roomiga
La daabacay måndag 18 november 2013 kl 13.28
Kadib matkii ay caddaatay in diiwaangelintii uu boliiska Skåne ku sameeyey qowmiyadda roomiga ay sharcidarro ahayd, ayey hadda dhici kartaa in dadkii ay diiwaangelintaas dhibaatadu ka soo gaartey – dadkaas oo gaaraya 4 500 oo qof – ay dowladda ka dalban karaan xaq magdhaw ah. Sidaasna waxaa soo werisey idaacadda Ekot. Waxayna toos u la xiriiri karaan hay’adda xeer-ilaalinta qaranka ama guddiga ammaanka iyo ilaalinta karaamada dadka.
Haddaba dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartey diiwaangelintaas waxay toos u la xiriiri karaan hay’adda ammaanka iyo ilaalinta karaamada dadka oo ka codsan karaan in ay baaritaano sameyso. Haddii ay baaritanadaas lagu helo qaladaad ku jira habka diiwaangelintaas loogu sameeyey dadkaas, ayna ugu muuqato in ay magdhaw keeni karto, wuxuu kolkaas guddigu arrinta u gudbinayaa hay’adda xeer-ilaalinta qaranka.
Dadka lagu daray diiwaanka boliisku sameeyey waxay fursad u yeelan karaan in magdhaw laga siiyo sharaftooda oo meel looga dhacay. Waxaa maanta 4500 qof oo mid ahaa dadkii diiwaanka la geliyey oo tiradoodu gaareysey 4 700 oo qof. Qaar badan oo ka mid ah dadkaas ayaa laga yaabaa in ay doortaan in ay dalbadaan magdhaw iyagoo kaashanaya guddiga ammaanka iyo ilaalinta karaamada dadka, taas oo u baahnaan doonta shaqo ballaaran, ayuu yiri guddoomiyaha guddigu Sigurd Heuman.
Dhanka kale Erland Kaldaras – oo hoggaamiyaha ururka dhallinyarada roomiga – ayaa sheegay in uusan qiyaasi karin tirada dadka doonaya in ay magdhaw dalbadaan.
- Waa ay adag tahay in la sheego, laakiin waxaan filayaa in qoysas tiradoodu aad u badan tahay ay la xiriiri doonaan guddiga ammaanka iyo ilaalinta karaamada dadka si ay dowladda uga helaan magdhaw ama ceebta oo laga tirtiro, ayuu yiri Erland Kaldaras.
Hay’adda xeer-ilaalinta qaranku horay uma soo baarin arrin noocaan oo kale ah. Balse waxaa la barbardhigi karaan dhacdo horay u dhacday oo ku saabsanayd nin loo xukumay magdhaw gaaraaya 5 000 karoon kadib markii magaciisa si qaldan loogu daray liiska dad looga yeeray maxkamadda Stockholm si loo xiro.